Ikhaya elithulile e-Amish COUNTRY Sunshine Bedrm #2 - I-Airbnb
Ikhaya elithulile e-Amish COUNTRY Sunshine Bedrm #2
Loudonville, Ohio, i-United States
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Sandy
Umzila omude wangasese obuyele emuva enkabeni ye-Amish Country enamahlathi nezihlahla kanye nezinyoni nezilwane zasendle ezizungeze indawo, ichibi elincane namahlathi athile kanye nendawo yokubasa ngaphandle eduze komsele ukuze ujabulele ubusuku obumnandi, konke ngaphakathi kwamamayela ambalwa okuhamba ngezinyawo noma ukugwedla ngesikebhe nokukhempa kokuqukethwe ezinhliziyweni zenu.
Umshini wokuwasha nokomisa nekhishi kuhlolwa kalula ngaphandle kwechibi elikhulu elingaphandle namahlathi emizila embalwa nendawo enkulu ngaphakathi!
ubusuku obungu-7 e- Loudonville
Woza UJABULELE nathi- (noma uwedwa) uhlezi ngaphandle ulalele isiqeshana sehhashi n buggy sung to the tune of twittering ingoma yezinyoni njengoba uphuza emoyeni ohlanzekile nokuphakama kwelanga ekuseni noma... ukushona kwelanga kusihlwa. Singamaminithi ayisikhombisa ukusuka e-Mohican state park, igalofu, izibindi zezikebhe, ukuhamba ngezinyawo, ukukhempa kanye nokuthenga edolobheni elincane imizuzu engu-20 ukusuka emnyuziyamu ye-Walk Walk wax, i-Massive Ohio state penitentary lapho kwathwetshulwa khona imuvi ethi ‘Shawshank Redemption'.
Imizuzu engu-30 ukusuka edolobheni lase-Berlin nawo wonke ama-Amiish okomisa ukudla okumnandi nokuyiningi kanye namabhikawozi futhi izitolo zezipho zase-Amish zigcina izifiso zakho zentliziyo! I-Behault cyclorama panoramic murals, noma nje uhambe ngemoto phakathi nezwe elihle kanye namaqabunga anemibalabala ekwindla noma ubuke umuntu wase-Amish olima inkundla yakhe entwasahlobo noma izingane zakhe zithengisa izinto zazo eceleni kwe-rd.in sumertime, umshini wakudala wokudansa imfashini ekwindla... izinto eziningi kakhulu ongazibona futhi uzenze!
Enjoy socializing , meeting new people, learning about other cultures, hosting, outdoors and all kinds of artsy stuff...
Hlola ezinye izinketho ezise- Loudonville namaphethelo